Goatemala: Ireo Vahoaka Hafavolokoditra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Septambra 2007 11:11 GMT
Vakio amin'ny teny Português, 繁體中文, 简体中文, Español, English
Taranaky ny teratany (hataontsika hoe hafavolokoditra eto)[indigenes] efa teto talohan’ny nahatongavan’ny Eoropeana ny maro an’isa amin’ny mponina eto Goatemala. Tena ankavitsiana no mba hafa volonkoditra monina eto. Noho izany zavamisy izany no tena nandraisan’ny eto amin’ny firenena ho zavadehibe nandrasana hatry ny ela ny Fanambaran’ny Firenena Mikambana ho fiarovana ny Zon’ny vahoaka hafavolokoditra (peuples indigènes) nivoaka tamin’ny 13 septambra lasa teo. Fa ny tena mahaliana dia ny teny sy ny fijerin’ny matrobolokoditra ary ny momba ny fanavakavahana eto an-toerana izay soratan’ny mpibilaogy Goatemalteka. Nivoaka tao amin’ny Democracia Multicultural [ES] ohatra ny lahatsoratry Lucia Escobar izay nilaza fa :
Na dia afa-manoratra izay tianao hosoratana amin’ny taratasy aza ianao dia hita ihany fa misy elanelana be ao amin’ny lazaina sy izay atao. Faly aho rehefa nivoaka ny Fanambaran’ny Firenena Mikambana ho fiarovana ny Zon’ny vahoaka hafavolokoditra. Naharitra hafiriana moa ho an’ny firenena maro vao manaiky fa olonkafa fotsiny fa tsy hoe olon-dia (=mpihetraketraka) na tsy tia fivoarana ny vahoaka hafavolokoditra? Haharitra hafiriana izao vao hajaina ny fahasamihafana? Haharitra firy taona indray vao homena lanja ny hay, ny zavakanto, ny fahalalana ho fampanajana ny tontolo iainana, ny fanajana ny rariny, ny fitandroam-pahamasinana ary ny raokandro efa nomeny nihoatra ny zato taona izay, ary hatramin’izao dia mbola mampahalala ho an’ny planeta ny fahendrena efa nananany anarivony taona izay?
Vao niadian-kevitra vao haingana tamin’ny blaogy Goatemalteka ihany koa ny resaka fanavakavaham-bolokoditra sy ny zon’ny vahoaka hafavolokoditra, indrindra noho ny laharana fahafito azon-dRigoberta Menchu, ilay hany hafavolokoditra nirotsaka hofidiana ho filoham-pirenena. Araka an’i Carpe Diem [ES] tao amin’ny Preguntas que hay que hacer dia :
Tany Uspantán, Quiché, toerana nahaterahan-dRigoberta Menchu , mpifidy 268 amin’ny 9655 ihany no nandrotsa-bato ho an’ny Loka Nobel ho amin’ny fandriam-pahalemana sady mpitarika ny hafavolokoditra. ¿Mpanavakavaka ve ry zareo amin’izany toe-javatra izany?
Amin’ny lafiny ilany indray, mba hafa kokoa izany hoe misy hafavolokoditra mirotsaka ho kandidà izany ho an’ny mpibilaogy sasany. Nanadihady ny fiantraikan’ny fsian’io tranga io ao amin’ny blaoginy i Jorge Cabrera :
Mety hihifikifi-doha ny sasany saingy tsara ny nirotsahany amiko. Menchu, nahafahan’ny sasany nibitsika ny tsikera, ny tantara ary ny vazivazy nandritra ny taona maro, no mba nahalalana izay mba eritreritra sy fomba fijerin’ny vahoaka hafavolokoditra. Ny fifidianana kosa no nanararaotan’izy ireo hitabatabany izay tiany lazaina…afaka mijery ohatra be dia be isika amin’ny aterineto.
Misy milaza fa noho ny fanavakavahana, ny hafa milaza fa noho izy vehivavy sy ny tsy fahampiambola nampiasaina no naharatsy ny vokatra azon’i Menchu. Ny azo heverina ho mety ho antony tokana dia ny noho ny foko nihaviana, misy ireo izay mifidy ny mpiray fihaviana aminy ihany. Moa fomba fijery manavakavaka izany ? Hoy ny mpanoratra ao amin’ny bilaoginy Guatemalalahistoria [es] :
Misy fanavakavahana sy fanilikilihana ny hafavolokoditra eto Goatemala, fa tsy fifanandrinana eo amin’ny samihafa foko na fanilikilihana ireo teratany izay tsy indios no hita fa noho ny foto-kevitra iainana, efa lalimpaka, misy ifandraisana amin’ny sarangam-pananana sy vondron’asa sy mifandray akaiky
Ny fanavakavahana sy ny saranga sosialy, lohahevitra mandeha hatrany ao amin’ny blaogy any amin’ny fiaraha-monina anjakan’ny fizarazarana. Ohatra azo itarafana izany ny ao amin’ny blaogy Antología del Desengaño [ES] misy ny lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe Guatemala de clase:
Firenena mbola miefitrefitra i Goatemala. Eto no mbola ahitana fanombanana tsy mandeha ilalana sy fitsarana ivelany mandiso eritreritra betsaka. Mazava fa eto tsy maintsy mifanaraka tsara amin’ny saranga na tadiavin’ny vondrona vao tafiditra anatiny. Amin’ny vondrona sasany, ny olona mitondra tombokavatsa dia olo-meloka. Any amin’ny sasany indray izay menasofina (dika bontolo : mavo volo) dia heverina ho mahay kokoa noho ny hafa.
Tsy tahaka fahita mahita ny safidy mizara noho ny faritra samihafa, na hevitra mizara noho ny fihaviana samihafa, tafakambana ny fizarazarana tamin’ity indray mitoraka ity. Tsy nifidy Filoham-pirenena ny olona fa nifidy izay ho olom-pamantarana an’i Amerika Latina manaraka. Maro ny mpibilaogy no nitsamboamboatra nanoratra izany ary tsy diso anjara koa ny haino aman-jery rehetra. Nampiasa ny blaoginy CARLOS PEÑA FANS [ES] ny mpankasitraka ny talentany hanohanany azy amin’ny fifidianana, araka ny voasoratra ao amin’ny vohikalany :
Blaogy voalohany vita eto Goatemala ana artista Goatemalteka , nametraka ny fiavahany eto Amerika Latina tamin’ny feony sy ny talentany.
Nanintona ny mason’ny rehetra izy ary nahazo ny fon’ny saranga rehetra, mpanankarena, mahantra, hofavolokoditra, tsy hafavolokoditra ary ny antoko ankavia. Noho ny asan-tserasera no anton’izany, ny bahana azony tamin’ny takela-gazety, ny fotoana manokana ho azy tany amin’ny haino aman-jery ary ny fanohanan’ny mpandraharaha sy ny orinasa. Tian-kaseho eto fa afa-maneho ny heriny ny serasera eto Goatemala hanaporofo amin’ny karazam-bondrona rehetra fa na dia lehibe aza ny elanelana sy ny fahasamihafana tany amin’ny fotoana lasa dia afaka miray sy mitovy hevitra ihany amin’ny lafiny sasany, na dia hoe fifaninanana anaty Fahitalavitra fotsiny ihany aza.